विवाहित जीवनको लागि १० सुमधुर टीप्स » Khulla Sanchar
विवाहित जीवनको लागि १० सुमधुर टीप्स
विवाहित जिन्दगी भनेको एक आपसको माया, बिश्वास, सामाजस्यता वा आफ्नो पनको महशुशमा टिकेको हुन्छ । दाम्पत्य जीवनको धेरै समस्याहरुको बाबजुत पनि कपल्स पूरै कोशिश गर्छन् कि उसको सम्बन्धमा मिठास बनिरहोस् भनेर । यस्ता नै केहि रहस्य छन् जसलाई जानेर हरेक कपल्स आफ्नो दाम्पत्य जीवनलाई खुशिमय र सुखमय बनाउन सक्छन् । त्यसैले आउनुहोस् जानौ के छ त दाम्पत्य जीवनका ती १० मीठा रहस्हरु ।
१. एकै समयमा श्रीमान श्रीमती दुबै क्रोधित नहुनु ः
जब मनको कुरा पूरा हुँदैन रिस त पक्कै जो कोहिलाई पनि उठ्छ र दाम्पत्य जीवनमा त यो रिस प्रायः कपल्समा हाबी रहेको हुन्छ । तिमी समयमा किन आएनौ…..? तिमीले समयमा लन्च तयार नगरेर के गरेर बस्यौ….?, तिमीलाई मेरो जन्म दिनको कुनै ख्याल नै छैन…? त्यो केटीलाई एकोहोरो किन हेरेको…? कारण जे पनि हुनसक्छ तर एक अर्काको बानीसँग रिसाउनु सामान्य कुरा नै हो । रिस उठ्यो भने उठ्न दिनुहोस् तर यति ध्यान दिनुहोस् कि दुबैजना एक साथ नरिसाउनुहोस् । यदि एक व्याक्ति त्यो समयमा शान्त रहन सक्यो भने समस्याबाट बच्न सकिन्छ । एक पार्टनर बोलिरहेको छ भने बोल्न दिनुहोस्, यस प्रकार उसको मनमा रहेको तपाईंप्रतिको गुनासाहरु निस्केर जान्छ अनि त्यसपछि तपार्इं उ सँग बसेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ ।
२.बहसमा पार्टनरलाई जित्न दिनुहोस्ः
आपसी बहसको नतिजा मतभेद हुनु भन्दा अरु कुनै छैन । बहस भै रहेको छ भने एकले अर्कालाई हराउने कोशिश नगर्नुहोस् । दाम्पत्य जीवनमा हार र जीतको कुनै मतलव नै हुँदैन । यदि बहस बढीरहेको जस्तो लाग्यो भने बहसमा आफ्नो पार्टनरलाई जिताएर निरर्थक बिबादबाट बच्न सकिन्छ ।
३.श्रीमानलाई नयाँ ट्राइ गर्न दिनुहोस्ः
मानिलिउ तपाईं किचनको स्वामिनी हुनुहुन्छ तर अदि एक दिन श्रीमानले कुनै रेसिपिज ट्राई गर्ने चाहना राख्छन् भने नरिसाउनुहोस् । धेरै जसो महिलाहरु भन्छन् तिमीले पूरै किचन फोहोर गर्छौ र मेरो काम बढाइ दिन्छौ यसैले किचनभन्दा बाहिर नै बस तर तपाई यो नभनेर श्रीमानलाई रेसिपिज बनाउने अवसर दिनुहोस् । तपार्इं उनलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यसमा तपार्इंहरु दुबै जना नै इन्जोइ गर्नसक्नु हुन्छ । यो मौकाको पूरा फाइदा उठाउनुहोस् र अर्कोकुरा श्रीमानज्यूको पाक कलाको तारिफ गर्न चाहि नभुल्नुहोला ।
४.फाइनान्स मेटर हेन्डल गर्न दिनुहोस्ः
फाइनान्स सँग जोडिएका कुरालाई यहि एक धारणा बनेको हुन्छ कि यो काम श्रीमानको हुन्छ अखिर को शेयर किन्ने बेच्ने, कहाँ लगानी गर्ने यसको चक्करमा पर्छ । श्रीमान पनि यसलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्र मानेर पूरै निर्णय आफै लिन्छन् । तर सबैभन्दा राम्रो हुन्छ की फाइनान्सको मामलामा श्रीमतीलाई पनि सामेल गर्नुहोस् यसो गर्दा कुनै बेला आवश्यक परेको समयमा उसले कसैको सहयोग लिनु पर्दैन र यो पनि थाहाँ हुन्छ कि तपाईंले कहाँ कहाँ पैसा इन्भेष्ट गर्नुभएको छ । यो मात्र होइन यदि तपार्इंकी श्रीमती कहिल्यै पनि तपाईंलाई फाइनान्सको कुरामा सल्लाह दिन्छीन भने उसलाई सहि रुपमा लिनुहोस् ।
५.आलोचना गर्नुहोस् तर मायासँगः
पर्टनरको कुनै कुरा मन परेको छैन भने या उसलाई उसको गल्ती महशुश गराउन चाहनुहुन्छ भने या त फेरि कुनै कुराको लागि उसलाई जिम्वेवार बनाउन चाहनुहुन्छ भने मायाले पनि यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ । आलोचना गरेको समयमा रिसा या उ प्रतिको घृणा समाबेश नगर्नुहोस् । हुनसक्छ तपार्इंको पार्टनरको दृष्टिकोण आफ्नो हिसाबले सहि छ तर तपाईंलाई त्यो गलत लागिरहेको छ । यसकारण तपार्इं गल्ती निकाल्नुहोस् तर नकराइकन । हेर मलाई तिम्रो यो कुरा मन पर्दैन…..या यदि फेरि अब यसो गर्यौ भने राम्रो हुनेछ…चिसौ रुमाल यदि बाहिर सुकायो भने गन्ध आउँदैन आदि आदि । यो ख्याल गर्नुहोस् कि कोहि अरुको सामुन्ने साथीको गल्ती या कम्जोरीको चर्चा भुलेर पनि नगर्नुहोस् ।
पूरै दिनभरमा आफ्नो पार्टनरको एउटा कुराकोलागि त कम्प्लीमेन्ट दिनुहोस् । कुनै कुराको प्रशंशा गर्नुहोस् या कामको । तपार्इंको पार्टनरलाई यसबाट खुशि मिल्छ की तपार्इं उनको प्रशंशा गर्नु हुन्छ, सानो–सानो कुराको ध्यान दिनुहुन्छ । यति मात्र होइन दिनभरिलाई यो कुराले पनि प्रभुल्ति बनाउछ की तपार्इं उनको साथमा जीवन बिताउदा खुशि हुनुहुन्छ । कम्प्लीमेन्टको आदान–प्रदानले जीवनमा एक नयाँ पन बनिरहन्छ ।
यो साडीमा तिमी धेरै राम्री देखिएकी छौ या……यो सर्ट लगाएर तिमी कुनै हीरो भन्दा कम देखिएका छैनौ…..यो कम्प्लीमेन्ट धेरै सामान्य छ तर सुन्नेको जीवनमा यसले मीठासपन घुलिदिन्छ ।
जसरी पार्टनरलाई काम गर्दा थेंक्यु भन्न भुल्नु हुन्न त्यसरी नै गल्ती भयो भने सरी भन्न पनि नभुल्नुहोस् । जानी–नजानी दाम्पत्य जीवनमा कुनै न कुनै गल्ती भै नै जान्छ त्यसलाई नकार्नेको सट्टा गल्ती स्वीकार्नुहोस् । दाम्पत्य जीवनमा उत्पन्न सबै मतभेद या तितोपन धुनकोलागि सरी सबैभन्दा उपयोगी साधन हो । एक साथी बाट यदि कुनै गल्ती भयो भने यसको प्रयोग आफ्नो साथीलाई तल देखाउन या उसलाई गलत साबित गर्नकोलागि नगर्नुहोस् । गल्तीलाई एक स्वभाविक मनोभाव मानेर पार्टनरसँग खुलेर उस बिषयमा कुरा गर्नुहोस् र साथै उसलाई यो एहेसास पनि गराइदिनुहोस् कि तपाई उ प्रति पूरा भरोसा गर्नुहुन्छ ।
८.हाँस्नुहोस्, मुस्कुराउनुहोस् रमाउनुहोस्ः
आफ्नो रोमान्टिक क्षणलाई याद गर्नुहोस् र उसको साथ–साथ त्यो क्षणको पनि जब तपार्इंको साथीलाई कुनै कुरामा खुबै हाँस उठेको थियो । यसको साथै हरेक दिन केहि समय साथै बिताउनुहोस् चाहे जतिसुकै व्यास्तता किन नहोस् । त्यो समय एक अर्काप्रति दोष नदेखाएर यस्तो कुरा गर्नुहोस् जसले तपाईंहरु दुबैजना नहाँसी रहन नसक्नुहोस् । चाहे त्यो फाल्तु कुरा या चुट्किला नै किन नहोस् । एक अध्ययनबाट यो कुरा अगाडि आएको छ कि जुन कपल्स एक साथ नियमित रुपले हाँस्ने गर्छन् र त्यो मीठो पलको बारेमा याद गर्छन् जुन उनीहरुले हाँसेर बिताएका थिए, उनीहरुको सम्बन्ध धेरै बलियो हुन्छ ।
सुखद दाम्पत्य जीवनमा पनि इष्र्याको भावना रहन सक्छ । यो सामान्य कुरा पनि हो । तर जब आपसमा बिश्वास रहदैन र शंकाले आफ्नो ठाउँ बनाउँछ भने त्यो इष्र्या असामान्य बन्न सक्छ ।
आफ्नो मनमा भ्रान्ति पालेर अथवा आफ्नो साथीलाई आहत गर्नको बदलामा खुलेर उ सँग आफ्नो मनको कुरा शेयर गर्नुहोस् । यदि तपार्इं आफ्नो साथीसँग माया गर्नुहुन्छ भने र उसको ईष्र्यालु व्यावहार देखेर पनि उ सँग बस्न चाहनुहुन्छ भने उसको कुरामा कुनै प्रतिक्रिया नगर्नुहोस् । तपार्इंलाई जलन यसकारण भै रहेको छ कि तपाईं साथीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ । त्यसैले मायाको साथमा थोरै धेरै जलन हुनु पनि हेल्दी हुन्छ ।
१०.साथीको कुनै कुरा राम्रो लाग्छ भने खुलेर प्रंशशा गर्नुहोस् र नराम्रो लाग्छ भने उसको कम्जोरमिा पनि अवश्य ध्यान दिनुहोस् । तपार्इंको बीचमा जतिसुकै माया या अन्डरस्टान्डिङ् किन नहोस् यो नसोच्नुहोस् की साथीले नभनेर नै तपाईंको मनको सबै कुरा बुझ्छन् । पार्टनरसँग आफ्नो कुरा नभनेर तपार्इं आफुभित्र नेगेटीभ इमोसन्सको पाल्ने अवसर दिनुहुन्छ जसले सम्बन्धमा कुनै बिषको जस्तो काम गर्छ । आफ्नो मनको कुरा भन्नुहोस् र साथीको फिलिग्सको पनि रेस्पेक्ट गरेर उनको कुरा सुन्नुहोस् ।